Ahoana ny famolavolana ny NTFS amin'ny alàlan'ny solosaina Mac OS | Fikolokoloana biolo
1 Lafiny ankapobeny amin'ny endrika NTFS
2 Solony amin'ny famolavolana NTFS miaraka amin'ny Mac OS amin'ny High Sierra sy ny dikan-teny taloha
2.1 Rindrambaiko NTFS-3G
2.2 Fiatoana ho an'ny Mac OS
3 Solony amin'ny famolavolana NTFS miaraka amin'ny Mac ao amin'ny Mojave sy ny dikan-teny manaraka
3.2.1 Fampiharana disk Utility ao amin'ny Mac OS
Amin'izao fotoana izao, misy karazana endrika maro ho an'ny kapila mafy sy singa fitahirizana solosaina Mac OS. Iray amin'ireo endrika ampiasaina indrindra ny NTFS ary amin'ity lahatsoratra ity dia hiresaka momba izany isika.
Manaraka izany, hanazava izahay Ahoana ny famolavolana NTFS amin'ny alàlan'ny solosaina Mac OS, mba hanararaotanao ny fahaiza-mitahiry ambony indrindra amin'ny fitaovana fitadidianao.
Lafiny ankapobeny amin'ny endrika NTFS
NTFS dia endrika rakitra ekena tsara amin'ny rafitra fiasa isan-karazany ary ny endrika izay ampiasain'ny kapila maro hafa ho toy ny singa fitahirizana hafa. Ny fanafohezana azy amin'ny teny anglisy dia mifanaraka Rafitra fikirakirana teknolojia vaovao.
Zava-dehibe ny manamarika fa ity endrika ity dia mifanaraka amin'ny Windows. Na izany aza, tsy midika akory izany fa ny kapila mafy na fitaovana fitahirizana hafa dia tsy vakian'ny Mac. Amin'ity tranga ity, ho fanovana fanoratana, fanovana ireo rakitra efa misy ary Endrika NTFSAo amin'ny solosaina Apple dia ilaina ny mampiasa safidy hafa ho an'ny kinova Mac OS, izay horesahinay etsy ambany:
Solony amin'ny famolavolana NTFS miaraka amin'ny Mac OS amin'ny High Sierra sy ny dikan-teny taloha
Ao amin'ny kinova Mac OS High Sierra sy ny dikan-teny taloha dia misy programa mety handefasana kapila sy fitaovana fitehirizana eo ambanin'ny endrika NTFS. Iray amin'ireto solony ireto ny Fandaharana NTFS-3G, izay afaka tanteraka.
Mampalahelo fa ny fametrahana an'ity programa ity dia tsy tsotra na intuitive toa ny ankamaroan'ny vahaolana ara-barotra. Ary koa, tsy manararaotra ny hafainganam-pandehan'ny famindrana atolotry ny teknolojia USB 3.0 izany, fa mahavita tsara ny asa. Raha te hampiasa an'ity programa ity dia mila rindrambaiko mpanohana koa ianao, ary ny rindrambaiko solonao Fiatoana ho an'ny Mac OS. Manaraka izany, hanazava ny fomba fampiasana NTFS-3G sy Fuse ho an'ny Mac OS izahay. Avy eo:
Raha te hampidina azy amin'ny Mac anao, mifandray amin'ny tranokalany ary kitiho ny rohy "NTFS - 3G ho an'ny Mac OS X xxxx.xx.x" ary araho ny dingana eto ambany:
Avy eo sokafy ny fonosana .dmg azo ary atombohy ny rakitra "Ampidiro ny NTFS - 3G".
Tsindrio izao ny bokotra "Araho" indroa misesy ary avy eo amin'ny "Manaiky> Mametraka".
Ampidiro ny tenimiafinao momba ny kaontinao ao amin'ny Mac OS ary kitiho ny bokotra "Mametraka rindrambaiko".
Vantany vao vita izany, dia hangatahina aminao indray ny tenimiafin'ny kaontinao ary angatahana ianao hamerina ny Mac anao, akatony fotsiny ny varavarankely NTFS-3G amin'ny fipihana eo amin'ny “Bokotra mena”Any amin'ny ankaviany ambony.
Ary farany, avereno indray ny solosainanao amin'ny alàlan'ny fanindriana ny marika Apple "Apple". Aorian'izay dia tsy maintsy mifidy ilay entana ianao "CV"ary vonona. Amin'ny manaraka miditra amin'ny rafitra ianao dia afaka manohy mamolavola kapila mafy sy lakilen'ny NTFS amin'ny farany fa tsy misy olana.
Fiatoana ho an'ny Mac OS
Raha te hampiasa an'ity fitaovana ity sy hahafahana mamolavola endrika tsara amin'ny NTFS dia tsy maintsy manaraka ireto dingana ireto ianao:
Voalohany indrindra misintona "Fiatoana ho an'ny Mac OS”Amin'ny Mac-nao ary apetraho.
Avy eo, mifandray amin'ny tranokalan'ny rindrambaiko, kitiho ny kisary voalohany eo amin'ny tsanganana ankavanana, eo ambanin'ny lohateny hoe Stable. Manaraka, sokafy ny fonosana .dmg azo ary kitiho indroa ny "Fiatoana ho an'ny Mac OS".
Ao amin'ny fikandrana fanampiny hitanao miseho, kitiho ny bokotra "manaraka”Nandritra ny in-telo misesy.
Avy eo tsindrio ny bokotra "OK" ary apetaho eo akaikin'ny entana ilay marika "Mac FUSE mifanentana sosona".
Fenoy izao ny fanamboarana amin'ny alàlan'ny fanindriana ny bokotra "Tohizo" sy "Install".
Ampidiro ny teny miafin'ny kaonty mpampiasa Apple anao ary safidio ny bokotra "Mametraka rindrambaiko"Y"hamita ny fanomanana ny".
Raha manao ny dingana etsy ambony ianao, dia mahita fampitandremana fa voasakana ny fanitarana rafitra, tsindrio ny bokotra "Sokafy ny safidin'ny fiarovana".
Avy eo, safidio ny bokotra "mamela”Eo amin'ny faran'ny efijery Preferensi System.
Ary farany, vantany vao miditra ao amin'ny solo-sainao Apple ianao dia ho afaka mamolavola ireo haino aman-jery ivelany mifandray Endrika NTFS. Mba hanaovana izany, ampiasao ny fampiharana Disk Utility default.
Solony amin'ny famolavolana NTFS miaraka amin'ny Mac ao amin'ny Mojave sy ny dikan-teny manaraka
Raha mampiasa Mac misy Mac OS Mojave ianao, ireo fitaovana azonao jerena apetraho amin'ny NTFS ny kapila anao karama daholo izy ireo. Izany dia satria ireo tsy andoavam-bola dia tsy mifanaraka amin'ny kinova farany an'ny rafitra fandidiana. Manaraka izany, holazainay ny fomba hafa mahomby indrindra amin'ity raharaha ity:
Ny rindrambaiko natolotra voalohany ho an'i Mojave sy ny dikan-teny manaraka dia Paragon NTFS ho an'ny Mac. Na dia voaloa aza ity rindrambaiko ity dia misy kinova fitsapana maimaimpoana mamela anao hanararaotra ireo fiasa rehetra mandritra ny 10 andro. Noho izany, etsy ambany izahay dia hanazava ny fomba fametrahana sy fampiasana azy.
Voalohany indrindra, raha mampidina azy io amin'ny Mac-nao dia mila mifandray amin'ny tranonkalanao ianao ary tsindrio ny bokotra “Download”Miaraka amin'ilay kinova izay mifanaraka amin'ny rafitrao.
Sokafy izao ".dmg fonosana”Ary kitiho ny rakitra Install Paragon NTFS.
Zahao ilay boaty eo akaikin'ny entana "Manaiky ny Fifanarahana Fahazoan-dàlana Software aho".
Tsindrio ny bokotra "manaraka”Ary ampidiro ny tenimiafinao momba ny kaonty Mac OS anao.
Tsindrio ny bokotra "Wizard fametrahana".
Avy eo, tsindrio ny bokotra "manaraka”Hanombohana ny vanim-potoana fitsapana ny programa.
Raha rehefa manao izany dia hita fa misy fampitandremana fa voasakana ny fanitarana rafitra, kitiho ny bokotra “Misokatra ny safidin'ny fiarovana”Ary tsindrio ilay“mamela”Izay hitanao eo amin'ny farany ambany amin'ny efijery System Prefers.
Vita ireo dingana teo aloha dia azonao atao ny mampiditra indray ny rafitra ary manampy rakitra vaovao ao amin'ilay Drive NTFS, ovao ireo efa misy ary apetraho ireo drive avy amin'ny Disk Utility. Mba hanaovana izany dia antsoy ny fampiharana avy amin'ny "Launchpad" amin'ny alàlan'ny "focus", "Siri" na ny "Applications folder" an'ny Mac OS.
Ho solon'ny Paragon NTFS ho an'ny Mac, fitaovana iray hafa azonao hivadika hahafahanao mamolavola NTFS dia Tuxera NTFS. Vahaolana karama ihany koa io, nefa azo sintonina maimaim-poana mandritra ny 15 andro.
Avy eo, hanazava ny tokony hataonao ianao mba hahafahanao mampiasa azy, avy eo:
Mandehana mankany amin'ny tranokala ofisialin'ny programa ary araho ny torolalana vitsivitsy.
Avy eo ampidiro amin'ny adiresy sahaza ny adiresy mailakao.
Tsindrio izao ny bokotra "Ampidino sy misoratra anarana”. Aorian'ny fanisana 5 segondra dia hanomboka ny fisintomana rindrambaiko.
Vantany vao vita ny fampidinana dia sokafy ny fonosana .dmg azo, ary, eo am-baravarankely izay hitanao miseho eo amin'ny biraonao, kitiho indroa ny "Apetaho ny kisary Tuxera NTFS".
Tsindrio avy eo ny bokotra "Tohizo> Ekeo> Mametraka".
Ampidiro ny teny miafina momba ny kaonty Mac OS anao ary kitiho ny bokotra "Mametraka rindrambaiko"Y"manaraka”, Mba hampavitrika ny andrana 15 andro an'ny programa.
Farany, soraty indray ny tenimiafin'ny kaontinao Apple ary kitiho ny bokotra "Tsara> Averina"ary vonona.
Raha mahita fampitandremana ianao momba ny fisakanana ny fanitarana ny rafitra dia tsindrio ny bokotra "Sokafy ny safidinao amin'ny fiarovana" ary tsindrio ny bokotra "Avelao" hita ao amin'ny System Preferences Tokony ho afaka manova ny fisie amin'ny drive NTFS ianao izao, manampy vaovao, ary mandrafitra azy ireo miaraka amin'ny fampiharana Disk Utility, araka ny nohazavaina etsy ambany.
Fampiharana disk Utility ao amin'ny Mac OS
Ankehitriny mba hamolavola kapila ao anaty NTFS amin'ny Mac, antsoy ny fampiharana Disk Utility. Ho azy:
Tsindrio ny kisary "Fitaovana kapila”Eo amin'ny“ Launchpad ”.
Mandehana amin'ny fikandrana Disk Utility eo amin'ny efijery.
Safidio izao ny kapila hamolavola endrika avy amin'ny sisisy ankavia ary kitiho ny "Start."
Fidio avy eo ny fidirana Endrika NTFS avy amin'ny menio mitete-midina Format.
Soraty ny anarana tianao homena ny singa ao amin'ny saha "Name" ary tsindrio ny "fanombohana”Hanombohana famolavolana ny fitaovana na kapila nofidinao.
Manoro hevitra anao alohan'ny hanombohana ny fomba format amin'ny ntf miaraka amin'ny mac, apetraho ny haavon'ny fiarovana. Amin'izany ianao dia hamafa ny angon-drakitra misy ao amin'ilay fitaovana nofidinao hiditra an-tsehatra. Mba hanaovana izany, kitiho ny bokotra "Safidy fiarovana" niraikitra tamin'ny tontonana hita maso ao amin'ny Disk Utility.
Ho famaranana, antenainay fa ireo fampahalalana rehetra ireo dia mifandraika amin'ny fomba hafa isafidianana Ahoana ny famolavolana NTFS amin'ny alàlan'ny solosaina Mac OS, manampia fanampiana lehibe ho anao. Raha tianao koa ity lahatsoratra ity, dia ampirisihinay hiditra manaraka ity rohy izay hahitanao ireo fampahalalana isan-karazany mety hahaliana anao.
Previous: Previous post: Fantaro raha nisy laharana voasakana niantso anao
Next: Next post: Ahoana ny fomba firaketana ny lalao Wii